कसरी बनाउने करियर ? जान्नैपर्ने ५ टिप्स  Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७५ जेठ ११ गते १८:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । यदि तपार्इं कलेजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा भर्खर कलेजमा भर्ना हुन लाग्नु भएको छ ? छ भने तपाईं आफ्नो जिवन र करियरको विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । यो यस्तो समय हो, जब तपाईंले लिएको एउटा निर्णयले तपाईंको भविष्यमा असर गर्नसक्छ ।
आज हामी तपाइलार्इं विज्ञहरुले बताएका केही टिप्स दिन गइरहेका छौं, जुन टिप्सबाट तपार्इंले यो आफ्नो करियर बनाउनका लागि धेरै कुरा जान्न सक्नुहुने छ ।
३. तपार्इं भविष्यमा के गर्न चाहानुहुन्छ ? यसको निर्णय तपाईं आफैंले आफ्नो क्षमताअनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको साथी के गर्दै छन् सोचेर कुनै निर्णय नलिनुहोस् । निर्णय लिने समयमा यो पनि सोच्नुस कि तपाईले रोजेको क्षेत्रमा ५ देखि ७ वर्षपछि कस्तो स्कोप रहने छ ।
४. एसईईदेखि १२ कक्षासम्म हरेक कोलोनीमा जो कोही पनि साथी हुन सक्छन् । तर, यसपछिको समयमा तपाईले कलेज भर्ना भएपछि मित्रतामा पनि सेलेक्टिभ हुन आवश्यक हुन्छ । राम्रो साथीको पहिचान गर्न सिक्नुहोस् । ती मानिसहरु जो तपार्इंको पढाई र करियरका लागि समस्या बनेका छन्,उनीहरुलाई आफ्नो लिस्टबाट हटाउनुहोस् । यसको मतल ती साथीहरुलाई आफ्नो जिबनबाट बाहिर निकाल्ने भने हैन । उनीहरुसँग सम्बन्ध बनाई राख्नुस् । हरकोही कुनै समय काम लाग्ने छन् ।
५. अब तपाईले प्रोफेश्नल बन्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । यदि रोजगार शुरु गर्नुअघि नै तपाइले प्रोफेश्नल बन्न सिक्नुभयो भने भविषयमा कुनै अफिसमा काम गर्न तपाईंलाई असहज हुने छैन । यसले तपाईलाई कुनै समस्या निम्त्याउन दिँदैन र भविषयमा आफ्नै व्यवसाय गर्दा पनि यसले धेरै मद्दत पुराउने छ । दैनिक भास्करबाट
समिर शेखर बज्राचार्यले गण्डकी छाड्ने, अब मुक्तिनाथ विकास बैंकको डेपुटी सीइओ हुने
प्रभु बैंकले खुलायो ठुलो संख्यामा जागिर, कुन पदमा कति ?